led screen မျက်နှာပြင်ဗီဒီယိုနံရံများ၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
led screen မျက်နှာပြင်ဗီဒီယိုနံရံများ၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို
LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ထုတ်လုပ်မှု၏နည်းပညာဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြချက်； LED နှင့်အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ငှားရမ်းခအတွက်အိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပမှငှားရမ်းထားသောပုံသေ LED နံရံများ, အမျိုးမျိုးသောကြော်ငြာဗီဒီယိုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။:
1) သန့်ရှင်းရေး: PCB သို့မဟုတ် LED bracket ကိုသန့်ရှင်း။ ခြောက်သွေ့စေရန် ultrasonic ကိုအသုံးပြုပါ.
2) LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် mounting ဘောင်: LED ကော်၏အောက်ခြေလျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်ရှိငွေကော်ကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက်သေဆုံးသည် (နံရံကြီး), တိုးချဲ့ပါ, နှင့်ကျယ်ဝန်းသေဆုံးထားပါ (နံရံကြီး) အဆိုပါကြည်လင်စားပွဲပေါ်မှာပေါ်မှာ, နှင့်ဏုအောက်မှာကြည်လင်သောဘောပင်ကိုသုံးပါ. အဆိုပါ PCB သို့မဟုတ် LED bracket က၏သက်ဆိုင်ရာ pads ပေါ်တွင်သေဆုံးတ ဦး တည်း Mount, ပြီးတော့ငွေကော်ပျောက်ကင်းဖို့ sinter.
3) အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ဖိအားဂဟေ LED: လက်ရှိအရေးအသား၏ ဦး ဆောင်ဘို့အ LED သေဆုံးဖို့လျှပ်ကူးပစ္စည်းချိတ်ဆက်ရန်အလူမီနီယံဝါယာကြိုးသို့မဟုတ်ရွှေဝါယာကြိုးဂဟေစက်ကိုအသုံးပြုပါ. LED ကို PCB ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်ထားသည်, များသောအားဖြင့်လူမီနီယံဝါယာကြိုးဂဟေစက်သုံးသည်. (TOP-LED အဖြူရောင်အလင်းကိုထုတ်လုပ်သောရွှေဝါယာကြိုးဂဟေဆော်စက်ကိုထုတ်လုပ်သည်)
4) LED ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင် ထုပ်ပိုး: ထုတ်ပေးပြီးနောက်, အဆိုပါ LED သေဆုံးနှင့် bonding ဝါယာကြိုး epoxy နှင့်အတူထိန်းသိမ်းထားကြသည်. PCB တွင်ဆေးသုတ်သည့်ဆေးသည်ဆေးကုသပြီးနောက်ဆေး၏ပုံသဏ္strictာန်နှင့် ပတ်သက်၍ တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်, အရာတိုက်ရိုက် backlight ကိုထုတ်ကုန်များ၏တောက်ပမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်. ဤဖြစ်စဉ်သည်ဖော့စဖရပ်၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုလည်းယူလိမ့်မည် (အဖြူရောင် LED).
5) အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ဂဟေ LED: backlight source သည် SMD-LED သို့မဟုတ်အခြားထုပ်ပိုးထားသော LEDs ဖြစ်ပါက, တပ်ဆင်ခြင်းနည်းပညာမတိုင်မီ LED ကို PCB board တွင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်.
6LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ဖြတ်တောက်ခြင်းရုပ်ရှင်: die-cut အမျိုးမျိုးသောပျံ့နှံ့ရုပ်ရှင်များနှင့်နောက်ခံအလင်းဖြင့်လိုအပ်တဲ့ရောင်ပြန်ရုပ်ရှင်လာကြတယ်နှင့်အတူ.
7) LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ခြင်း: ပုံဆွဲ၏တောင်းဆိုချက်အရသိရသည်, မှန်ကန်သော orientation ကိုအတွက်နောက်ခံအလင်း၏အမျိုးမျိုးသောဒေတာနည်းပညာကို install.
8) အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်စမ်းသပ် LED: နောက်ခံအလင်းအရင်းအမြစ်၏ photoelectric parameters များကိုစစ်ဆေးပြီးအလင်းညီညွတ်မှုသည်ထူးခြားမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ.
9 LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ထုပ်ပိုး: လိုအပ်သောအဖြစ်ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သိုလှောင်ထုတ်ကုန်
မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် LED ဗီဒီယိုနံရံထုတ်လုပ်ခြင်း.
ရေသည်ပြင်ပမှ ဦး ဆောင်သောဒီဂျစ်တယ်နံရံမျက်နှာပြင်ကိုမတော်တဆဝင်မိလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ